IiNjini zeThermal- Ikkaro
yokuqalisa >> Motors >> Iimoto ezishushu
Un injini yobushushu iseti yezinto zoomatshini, ezivumela ukufumana amandla oomatshini kwi imeko yokufudumeza kolwelo oludlulayo oludlula kuyo.
Ividiyo egqwesileyo ekusebenzeni kwenjini ye-4-stroke. Izigaba ezi-4, inaliti, ucinezelo, ukwanda kunye nokuphelisa kubonwa ngokucacileyo, kunye nokusebenza kwezivalo kunye neepiston.
Uyidibanisa njani imoto
Uyidibanisa njani injini ye-4-stroke. Njengenjini esebenza ngevidiyo, inolwazi kakhulu, nangona kungcono ukuthatha injini endala, yiphule kwaye uyibuyisele kunye. Enye yezona ndlela zibalaseleyo endizenzileyo kubomi bam bonke.
Ukwakha iinjineli zekhaya ezenziwe ngeSteam
Ukuhamba ngeModeli yaseArgentina
Ndiyifumene le miyalelo ngendlela yokwakha injini elula esebenza kakuhle.
I-piston ivuliwe kwisikrufu sobhedu
Isilinda esinye sobhedu esisetyenziswa kwigesi enamacala amathandathu (enye yeeflethi endizisebenzisayo njengevalvu yenjini) yentloko yesilinda isebenzisa ingqekembe yobhedu ethengiswa ngetini
Sebenzisa isiqwenga sealuminium heatsink njengendibaniselwano phakathi kwesakhelo sesilinda kunye nesilinda.
Ingceba yobhedu esele igqityiwe ngobuso obune obukhupha ngaphandle kwibloko yesiphelo yombane sisiqwenga esixhasa isilinda kwaye silawula ukondla isilinda ngomphunga
Isitshixo endisikhupha kwisilinda segesi yomoya opholileyo njengestopcock kwibhoyila endiza kuyilawula nge-servo.
Jonga inqaku elipheleleyo
Eolipíla okanye Aeolus kaHeron
La Eolipilla okanye Aeolus kaHeron ithathwa njenge Injini yokuqala yobushushu kwimbali.
Umqambi wayo yayinjineli yamaGrike kunye nesazi sezibalo UHeron waseAlexandria (Omdala) wenkulungwane yokuqala ka-AD uHeron uthathwa njengomnye wabasunguli bezinto zakudala, izifundo zakhe kunye nemisebenzi yakhe zimele ixesha lamaGrike.
Ezona zixhobo zakhe zaziwayo zezi Umthombo kaHeron kunye ne-Eolipila (aelópilo okanye aélópila) esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo. Ukongeza kwizifundo ezininzi kwimathematics, i-optics kunye ne-pneumatics awayengumqambi kuyo.
La Aeolipila, Yenziwa ngumngxunya osikileyo okuphuma kuwo iityhubhu ezibini ezigobileyo apho umphunga wamanzi uphuma khona kwaye uyenze ijikeleze.